बलुको अन्त्येष्टि : अनुसन्धानका लागि डिएसपि धर्मराज भण्डारीको नेतृत्वमा ७ सदस्यिय छानबिन टोली गठन-Nagarikaawaj.com
बलुको अन्त्येष्टि : अनुसन्धानका लागि डिएसपि धर्मराज भण्डारीको नेतृत्वमा ७ सदस्यिय छानबिन टोली गठन
कपिल ज्ञवाली/बुटवल, २४ पुस–
युवासंघ नेपालका कार्यकर्ता बलु भनिने बसन्त पौडेलको देवघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ ।पुस २१ गते शुक्रबार आफ्नो सःमीलमा आगो लापिरहेका समयमा देबदह ढेकावरमा उनको अज्ञात समुहले गोली हानी हत्या गरेको थियो ।
देवदह नपा–२ ढेकारका बलु पौडेल माथि मोटरसाइकलमा आएका दुइ जनाले गोलि प्रहार गरेर भागेका थिए । व्यवसायी एवं एमाले कार्यकर्ता पौडेल एमालेका पूर्व क्षेत्रीय कमिटीका सदस्य निलकण्ठ पौडेलका एक मात्र छोरा थिए ।
साविकको केरवानी गाविसको पूर्व अध्यक्ष निलकण्ठ देवदह क्षेत्रका समाजसेवीका रुपमा पनि चिनिन्छन् भने उनका छोरा वसन्तलाई पनि इमान्दारका रुपमा स्थानीयले लिन्थे । मृतक बलुको आजै बुटवलमा शबयात्रा पछि देवघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको हो ।
बुटवलमा भएको सभामा एमाले उपमहासचिब घनश्याम भुसालले पार्टीको झण्डा ओढाएका थिए । उनले यस्ता घटना दोहोरिन नदिन प्रहरी प्रसाशनको ध्यानाकर्षण गराए । उनले यसप्रकारको घटना निन्दनीय भएको उल्लेख गरे ।
गोली हाने लगत्तै उनलाइ बुटवलको लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा ल्याउदै गर्दा बाटैमा मृत्यु भएको थियो । घटना घटे लगत्तै आफु मलेसिया रहेको बताउने मनोज पुनले बुटवलका पत्रकारलाइ फोन गरेर घटनाको जिम्मा आफुले लिने बताएका थिए ।
आफ्ना केटाहरुलाइ बलुले अनाबश्यक दुःख दिएकाले हत्या गरेको पुनले फोन मार्फत् पत्रकारलाई बयान दिएका थिए । घटनापछि २ दिन रुपन्देही बन्दको आब्हान पनि गरिएको थियो । आइतबार ३ बुदे सहमति पछि बन्द फिर्ता भएको हो ।
डिएसपि धर्मराज भण्डारीको नेतृत्वमा सात सदस्यिय छानबिन टोली गठन :
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक श्याम ज्ञवालीले हत्यामा संलग्नको खोजी र अनुसन्धान भइरहेको नागरिक आवाजलाई बताए । उनले केहि दिनमै घटनामा संलग्नको पहिचान गरिने र कानुनी दायरामा ल्याउने बताए । घटनाबारे अनुसन्धानका लागि प्रहरीले डिएसपि धर्मराज भण्डारीको नेतृत्वमा ७ सदस्यिय छानबिन टोली गठन गरेको छ ।
टोलीले गहिरोढंगले काम थालेको र १५ दिनमा सत्य तथ्य छानबिन गरि रिर्पाेट बुझाउने डिएसपि भण्डारीले नागरिक आवाजलाई बताए ।
मृतकलाइ सहिद घोषणा,परिवारलाइ क्षतिपूर्ति ,शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभुती,हत्यरालाइ तत्काल कानुनी दायरामा ल्याइ कारबाहि गर्ने र देबदह क्षेत्रमा थप सुरक्षा बढाउने सहमति भएको थियो । सहमतिपत्रमा गतसाल पुस ४ गते सोहि क्षेत्रमा हत्या गरिएका दुर्गा तिवारीलाइ पनि सहिद घोषणा गर्नुपर्ने अर्काे बुदा छ ।
एक बर्षको अन्तरमा एउटै प्रकृति र एकै ठाउका दुई युवा नेताको हत्या भएपछि हत्याराको खोजी गरी तत्काल कानूनी कारवाही गर्न प्रहरीमाथि दबाब पनि परेको छ । एमाले निकट युवा संघका दुई नेताहरुको एक वर्षको अन्तरालमा हत्या भएपछि अहिले रुपन्देहीमा सुरक्षा चुनौतीका बारेमा प्रश्न उठिरहेको छ ।
स्थानीयहरु बोल्न मान्दैनन् , मनोज पुनको त्रास कहिलेसम्म ?
घटनापछि स्थानीय निकै त्रासमा बांचीरहका छन् । उनीहरु मिडियामा आउन र प्रतिक्रिया दिनै चाहदैनन् । उनीहरु भन्छन्—‘हामी जोखिम मोल्न चाहदैर्नौ,यस्ता घटना घद्दा हामी निकै त्रसिद छौं ।”
घटना लगत्तै मनोजले पत्रकारलाइ फोन गरेर लिएको जिम्मेबारी सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । स्थानीयहरु मनोजको नाम लिदा नै त्रर्सिन्छन् । फरार अभियुक्त मनोज युवा संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष दुर्गा तिवारी र एमाले कार्यकर्ता बसन्त पौडेलकोे हत्यामा संलग्न छन् भनिएको छ ।
उनी एमाले र माओवादी कार्यकर्ता भएर देबदह क्षेत्रमा चिनिन्थे । उनलाइ युवा संघले प्रबेश गरेको ५ महिनामै कारवाही गरेर संगठनबाट उनलाई निकालेको थियो । सोही बेलाको रिसिइबी पनि उनले बेलाबेलामा यस्ता घटना घटाएर फर्ने गरेका छन् । उनले दुर्गा तिवारी र बलुलाइ फोन मार्फत् सुध्रिन र आफ्ना केटाहरुलाइ दुख नदिन चेतावनी दिदै आएका थिए ।
देवदह न.पा. ६ का बर्ष २९ को मनोज पुन अहिलेको घटनाभन्दा अघि संगठित अपराध, हातहतियार खर खजना र ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा संलग्न रही फरार रहेको प्रहरीले जनाउदै आएको छ ।
गतसालकै सहमति उधारै,कार्यान्वयन कहिले ? :
गतसात पुस ४ गते भएको हत्यापछि आन्दोलित रुपन्देही एक हप्तापछि शान्त भयो । मृतक तिवारीलाइ सहिद घोषणा गर्ने सहमति अझै उधारै छ ।अहिलेपनि आन्दोलनकर्ताले उधारो सहमति गरेर बन्द फिर्ता त गरे । तर त्यसपछिका दायित्व र दबाब कत्ति दिनेहुन् त्यो भने हेर्न बांकी छ ।
मनोजको निरन्तर धम्की :
घटनापछि आन्दोलन गरिरहेका युवा नेतृत्वलाइ मनोज फोन गरेर घर गएर सुत्न चेतावनी दिएका थिए । उनले धेरै चुरीफुरी नगर्न र आन्दोलन नचर्काउन भनेका थिए । उनले धेरै ब्यक्तिहरुलाइ फोन गरेका थिए ।
रुपन्देहीको देवदह ढेकारमा गोली हानी बसन्त पौडेलको हत्या, हेरौं ताजा भिडियो